Tokyo Institute of Technology - injineernimada Study in Japan
gaabinta : ninba
aasaasay : 1881
Ha iloobin in aad wada hadlaan Tokyo Institute of Technology
Qor at Tokyo Institute of Technology
Tokyo Tech waa jaamacadda ugu sareeya qaranka ee sayniska iyo farsamada ee Japan oo leh taariikh ka bilaabanaya ka badan 130 sano. Of the qiyaastii 10,000 ardayda Ookayama ah, Suzukakedai, iyo Tamachi xarumood, qeybtii yihiin barnaamijka shahaadada bachelor ay halka qeybtii kale ee ku jira barnaamijyada degree phD sayidkiisa oo ay. ardayda International tirada 1,200. Waxaa jira 1,200 awood iyo 600 xubnaha maamulka iyo farsamada shaqaalaha.
Qarnigii 21-aad, doorka jaamacadaha sayniska iyo tiknoolajiyada ayaa si isa soo taraysa u muhiim ah. Tokyo Tech sii si ay u horumariyaan madaxda caalamka ee xarumaha sayniska iyo farsamada, iyo gacan ka geysaneysaa hagaajinta ee bulshada iyada oo ay cilmi, diiradda on xal arrimaha caalamiga ah. gool muddo-dheer The Institute waa in ay noqdaan sayniska iyo farsamada jaamacadaha dunida hoggaaminaysa.
Sida mid ka mid ah jaamacadaha ugu sareeya Japan ee, Tokyo Institute of Technology oo doonaysa in ay ka qayb qaataan ilbaxnimada, nabad iyo barwaaqo adduunka, oo ujeedadiisu tahay horumarinta awoodaha insaanka caalamiga ah heer sare par marayo cilmi hormuudka iyo waxbarashada sayniska iyo tiknoolajiyada, oo ay ku jiraan maamulka warshadaha iyo bulshada. Si loo gaaro shaqada this, waxaan leenahay isha ku waxbarista ardayda aadka moral si ay u bartaan ma aha oo kaliya aqoonta sayniska laakiin sidoo kale khibrad ah ee farshaxanka deeqsi, iyo aqoonta isku dheeli tiran oo ka mid ah cilmiga bulshada iyo culuumta, oo dhan, halka cilmi qoto dheer ka aasaaska in ay ku dhaqmaan la bartay tacliinta. Iyada oo hawlaha kuwan, waxaan jeclaan lahaa in ay gacan ka joogtaynta caalamiga ah ee dunida dabiiciga ah iyo taageerada nolosha aadanaha.
School of Bioscience iyo bayotechnoolajiyadda
Graduate School of Science iyo Engineering
Graduate School of Bioscience iyo bayotechnoolajiyadda
Iskujir Graduate School of Science iyo Engineering
Graduate School of Science Information iyo Engineering
Graduate School of Go'aan Sayniska iyo Technology
In muddo hore Kacab, ugu dhakhsaha badan ka dib markii furitaanka ee dalka, waxa ay noqotay lagama maarmaan ah in Japan baaqbaaq khayraadka aadanaha si ay u horumariyaan farsamada casriga ah warshadaha. Dowladda ayaa waxaa si firfircoon horumarinta waxbarashada farsamada ee muwaadiniinta ay wakhtigan si ay u horumariyaan sayniska sare iyo technology in horay ahayd wax caadi ah in Europe iyo Maraykanka. Against asalka this, dugsiga farsamada qaranka ugu horeysay ee Japan, Dugsiga Farsamada Kogakuryo ah, waxaa la aasaasay by Wasaaradda Engineering ee 1873.
Ilaa waqti isku mid ah, Wasaaradda Waxbarashada aasaasay Kyojo Seisakugaku ee 1874 at jeedinaya of Gottfried Wagener, saynisyahan a-dhashay Jarmal. Wagener lahaa cod ah oo ku saabsan sida loogu baahan yahay waxbarashada farsamo la taaban karo ee Japan si ay u baaqbaaq injineerada sare iyo injineerada. Inkastoo Kyojo Seisakugaku la xiray saddex sano ka dib, waxaa la dugsi kacaan in ardayda la baray xirfado wax ku ool ah oo ay la socdaan aragtiyaha cilmiyeed ay soo saaraan injineerada lagama maarmaanka u ah casriyaynta warshadaha Japanese.
Seiichi Tejima, oo markaas ahaa kaaliyaha agaasimaha guud ee Museum of Education, wada jir ah ula Wagener riixay waxbarashada farsamada iyo warshadaha casriga ah la saarayo on codsiyada la taaban karo. Iyada oo taageero ka Ryuichi Kuki iyo Arata Hamao ee Wasaaradda Waxbarashada, ay ku guulaystaan ​​inay soo jeedinaya wasiirka in la dhiso School Tokyo ee xirfadaha ee May 1881.
U diyaar garowga furitaanka dugsiga bilaabay. manhajka A waxaa la aasaasay si waafaqsan Xeerarka iyo Nidaamyada of School Tokyo ee Vocational ansixyo in 1881. Sharciyadan ayaa sheegay in dugsiga waa in ay bixiyaan waxbarashada sayniska farsamo iyo warshadaha loo baahan yahay in ay noqoto macalimad dugsi xirfadeed ama injineer ka tirsan. Kuramae in Taito City dhow River Sumida la doortay sida site for campus ku. Kuramae loola jeedaahore lagu kaydiyana oo wuxuu magaceedii u yimaado isagaa khasnadihiisa ka soo bariiska ee Shogunate Tokugawa waxaa ku yaalla.
Taizo Masaki ahaa maamulaha koowaad ee dugsiga iyo fasallada ugu horeysay lagu qabtay 1882 in laba waaxyaha: Waaxda mashiinada iyo Waaxda Applied Chemistry. School Vocational Tokyo ayaa ka qalin jabiyey fasalkii ugu horeysay ee July 1887. Markii hore dugsiga waqti adag qoranayaan ardayda, sababtoo ah xirfadaha farsamada ayaa dhaqan ahaan dhaxasheen ee Japan in nidaamka heshiiska waxbarasho ah. Wareeg ka barasho waxbarashada farsamada casriga ah ayaa kaliya bilaabay. In 1884, Wagener bilaabay inuu wax baro dugsiga si waafaqsan mabaadi'da iyo hababka Seisakugaku ku Kyojo hore. Waxa uu horumariyo technology casriga ah ee wax soo saarka ballaaran ee ku warshadaha wax soo saarka sida dhoobada, galaas, iyo lacquerware. Wagener waxay bixiyaan saldhigga horumarka ka dib Tokyo Tech ee sida wax soo saarka warshadaha wuxuu yeeshay xididdo ee Japan.
In 1890, Seiichi Tejima wareegay shaqada Masaki iyo noqday maamulaha dugsiga. Tejima tegey inay dalka Mareykanka si ay u bartaan markii uu ahaa 21 sano jir ah oo ahaa turjubaanka of Mission Iwakura ah, shaqada a Japanese diblomaasiyadeed in u safray dunida ku baahsan. Markii dambe waxa uu la wareegay doorka agaasimaha guud ku xigeenka oo ka mid ah Museum of Education, oo wuxuu tegey Paris iyo Philadelphia ee Bannaanbaxyada Adduunka. Laga soo bilaabo waayo-aragnimada, kuwaas oo Tejima noqday doode horyaal ee waxbarashada farsamada ee Japan a. School Vocational Tokyo ayaa waxaa loo baxshay Dugsiga Farsamada Tokyo ee 1890 ka dibna Dugsiga Farsamada Tokyo Sare ee 1901. Madaxda badan jaamacadaha iyo warshadaha iyada oo albaabbada ag maray muddada 25-sano ah, taas oo keentay Tejima dugsiga.
odhaahda An kacay inta lagu guda jiro sano ee Dugsiga Farsamada ee Tokyo. “Meel walba waxaa jira shooladda a, halkaas waxaad ka heli doontaa qof ka Kuramae,” taasoo la micno ah in meel kasta waxaa jiray adag warshadaha oo baaxad weyn, graduate ka mid ah dugsiga ayaa ku lug leh in ay aasaaska. Kuramae hadhay xarunta waxbarashada farsamada ilaa dugsiga la gubay oo dhulka ku on September 1, 1923 marka Kanto Weyn Dhulgariirka ku dhuftay.
Ma rabtaa wada hadlaan Tokyo Institute of Technology ? su'aal kasta, comments ama dib u eegista
Photos: Tokyo Institute of Technology rasmiga ah Facebook
Tokyo Institute of Technology dib u eegista
Ku biir si ay ugala hadlaan of Tokyo Institute of Technology.
Tokyo Medical University iyo ilkaha Tokyo